» जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरको प्रेस विज्ञप्ति
जनसरोकार केन्द्र मकवानपुरको प्रेस विज्ञप्ति
विषय : कोरोनाबाट राहात पाउन नयाँवर्ष संगै उत्पादनमा जोडिदै खेतबारी बाँझो नराखौ ।
३० चैत्र २०७६, आईतवार २०:४२
मानविय सभ्यताको चुनौतीको रुपमा देखापरेको कोरोना भाईरसबाट नेपाल, नेपाली अनी समस्त विश्वका मानवलाई कसरी जोगाउने भन्ने प्रमुख कुरा संगै हामी नेपालीहरुको नयाँ वर्ष २०७७ भोलीदेखी शुरु हुदैछ । यस अवसरमा विश्वमा नै मानवीय क्षती रोक्न र नेपालमा कुनै पनी मानिसको मृत्यु यो माहामारीको काराणले नहोस भनी जन सरोकार केन्द्र,मकवानपुरको तर्फबाट सबैमा हार्दीक शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।
कोरोनाको माहामारी रोक्न समयमा नै नेपाललाई लकडाउन गर्ने सरकार, सरकारको लकडाउन गर्ने निर्णयलाई मानेर सहयोग गर्ने आम नेपाली जनता, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा मानवीय कल्याणमा ज्यानै जोखिम पारेर खटनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सम्बद्ध कर्मचारी लगायत सबैमा तपाईहरु सुरक्षीत रहनुहोस र सेवा गर्ने प्रेरणा मिलोस भन्ने हृदयदेखीकै शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।
आफ्नो ठाउँवाट सुझाब सल्लाहा, दिई सकेको सहयोग गर्ने राजनैतकि पार्टीहरु, पत्रकार वुद्धीजिवी, वकिल लगायत यो मानवीय संकटमा सहयोग गर्ने सबैलाई नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
संकटका बेला उच्चत्तम मानवीयता प्रदर्शन गर्दै स्टक रहेको सामानमा मुल्य बृद्धि नगरौ । पसल र ठेलाहरुमा सामान किन्दा सामाजिक दुरी कायम गरौ । छिमेकी प्रदेश र छिमेकी जिल्लामा कोरोनाका बिरामी उपचाररत रहेकोले हामी सबै सचेत बनौ । खानपुग्नेले राहत लिईदिँदा निम्छराहरुको गाँस काटिने भएकोहुँदा राहतको सदुपयोग गरौँ । आफ्नो टोल छिमेकमा भएकाहरु भोकै छन भने दुई छाक खाना खुवाउने व्यवस्था गरौँ । यो संकटको घडिमा राज्यको मात्रै सबै दायित्व हो भन्दा मानविय संवेदना ओझेलमा पर्ने हुदा हामी सबैले नागरिक अभिभारा पुरा गरौँ । तत्कालको लागि राहातमा देखिएको वेथितीलाई नियन्त्रण गर्न सबै राहात पाउनेहरुको रेकर्ड राखी एकद्धार प्रणलिबाटै दिने कुरालाई ध्यान दिदै स्थानिय प्रशासनले मुल्युसचि राखी अनुगमणलाई अझबढी प्रभावकारी वनाई समस्यासंग जुध्नपर्ने आवश्यकता रहेकोले यस तर्फ ध्यान दिन स्थानिय निकाय र सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ ।
हामीलाई थाहा छ एकदिन बन्दहुदा अरबौ रुपैया नोक्शान हुन्छ । राज्य संचालन गर्ने स्रोतको रुपमा रहेको राजस्व नउठेर राज्यको ढुकुटी कमजोर हुन्छ । दातृराष्ट्रहरु आफै समस्यामा परी केही दिननसक्ने भएपछी राज्यलाई नियमित काम गर्न पनि अफ्ठेरो पर्न सक्छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौँ । देशमा र बैदेशीक रोजगारीमा गएकाहरुको रोजगार ठप्प हुदा, व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउदा, सम्पुर्ण ज्यालागर्ने रोजगारी बन्दहुँदा अब स्कुल कलेजमा फि तीर्न सक्दैनन भन्ने पनि हामीले बुझेका छौ । सबै आम्दानीका स्रोतहरु न्युनिकरण भएपछी विकाश निर्माण पनि कमहुन्छ भन्ने पनि हामीले बुझेका छौ ।
हामीहरुले पाउदै आएका सेवा, सुविधा, भत्ताहरुपनि कमहुन सक्छन भनेर पनि हामी मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्दछ । राज्यको ठुलो धनराशी स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्चहुदा र तत्कालको मानविय समस्या समाधान गर्दा अन्य समस्याहरु पर्न सक्छन भनेर हामी तयारी अवस्थामा रहनै पर्दछ ।
भोली कोरोनाको माहामारी बढदै गएको अवस्थामा लकडाउन गर्नुको बिकल्प पनि छैन त्यस्तो अवस्थामा हामीहरुसंग पैसा छ तर सामान नपाईन पनि सक्दछ । त्यसैले हामीहरुले बिकल्पको खोजी अहिल्यै देखी गर्नु नै पर्दछ ।
धेरै समय काम नगर्दा र नपाउदा देखिने मानसिक समस्याबाट पनि हामीहरुले उन्मुक्ती पाउने उपाय खोज्नै पर्दछ । त्यसैले हामीहरुले यी समस्याहरुबाट उन्मुक्ती पाउनकोलागि कोरोनाको समाप्ती हुनैपर्दछ । हाम्रो जस्तो गरीब र स्रोत साधन कमभएको मुलुकमा लकडाउन भन्दा अरु बिकल्प छैन भन्ने हामीले बुझेका छौ । सिंगो मानवजातीसंगै हामी नेपालीहरुले पनि यो समस्या समाधानको उपाय खोज्दै भावी योजना वनाउनै पर्दछ ।
यो समस्याबाट उन्मुक्ती पाउने उपाय भनेको लक डाउन, लक डाउन, लक डाउन, नै हो । यो समयमा हामीहरुले गर्नसक्ने खेतीकै काम हो । हामीहरुका अगाडी कुनै खाली जग्गा छनभने जे उम्रन्छ रोपौ । घरअगाडी रहेका खाली जग्गा जो–जस्को भएपनि केही न केही उत्पादन गरौ । सकिन्छ एक्लै रोपौ सकिदैन सामुहकि रुपमा रोपौ तर खेतबारी बाँझो नराखौ । यसले हामी सबैलाई उत्पादनतर्फ अग्रसर पनि गराउनेछ । स्वस्थ खानेकुरा पनि प्राप्त हुनेछ । समस्या समाधान भए पनि नभएपनि अब यी कुराहरुमा हाम्रो योगदानको जरुरी छ । यो कोरोनाको समस्या समाधान हाम्रो देशमा भएपनि अरु देशमा नहुनसक्दछ । हामी धेरै खाद्यन्नहरुमा परनिर्भर छौँ । त्यसैले खाद्यन्न केही नआउन पनि सक्दछ । त्यसैले आज रोपेको बाली केही समयमा अवस्य फल्नेछ र हामीले केही राहात प्राप्त गर्न सक्दछौँ ।
त्यसैले आउनुस यो नयाँ बर्ष २०७७ को शुरुवतसंगै ,कोरोनाले ल्यायको त्रास र महामारिसंगै सुखानुभुतीहुने उत्पादन कार्यमा जोडिई अगाडी वढने कोशीस गरौँ । बाँझो खेतवारी नराख्ने प्रण गरौँ । आजैदेखी मल बिउ जेजस्तो जाँहा पाईन्छ खोजौ र रोपौ खेती गरौँ । यो कोरोनाको समस्यासंगै हामी सबै उत्पादनसंग जोडिऔ भन्ने नयाँ वर्ष २०७७ को हार्दीक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ
अधिबक्ता ध्रुबप्रसाद चौलागाईं
संयोजकःजनसरोकार केन्द्र, मकवानपुर, २०७६/१२/३०
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ !
डाक्टरलाई अभद्र व्यवहार गर्ने उत्तम कार्कीलाई आवश्यक कारवाही होस्
कफन बाँधेर लडेको समुदायको सम्मानका लागि पनि नेवा:ताम्सालिङ
लोभी र पापी कहिल्यै कम्युनिस्ट हुनै सक्दैन !
मुआब्जा दिएर हेटौंडाको सडक विस्तार गरौं